ရျောနယျလျဒိုကိုခေါကျထားလိုကျလို့ အတ်တလနျတာကို ရှုံးခဲ့တာကွောငျ့ စုပျလညျးစူး စားလညျးရူးဖွဈသှားရတဲ့ နညျးပွပီယာလို – Sports A2Z
စကူဒတျတိုဖလားကို ၉ နှဈဆကျ သိမျးပိုကျပွီးအီတလီကို ဆယျစုနှဈတခုကွာ တသမတျတညျး လှမျးမိုးထားဖို့ ကွံစညျနတေဲ့ အိုးလဒေီတို့ရဲ့ ရညျရှယျခကျြဟာ အခု ၁၀ နှဈမွောကျမှာတော့ ပကျြစီးခဲ့ပွီဖွဈပွီး ဒါက နညျးပွအ​ပွောငျးအလဲ၊ ပီယာလို နဲ့ ရျောနယျဒိုတို့နဲ့ တိုကျရိုကျသကျဆိုငျနတေယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ အတ်တလနျတာနဲ့ပှဲမှာ ရျောနယျလျဒို ဝငျမကစားခွငျး မရှိခဲ့ဘူး။ ဂြူဗငျတပျဈရှုံးတယျ။ ဒါက ရျောနယျလျဒို မပါတဲ့ ၄ ပှဲစလုံးကို ဂြူဗငျတပျဈက ရှုံးနိမျ့ခွငျးဖွဈတယျ။ အခကျြအလကျက သကျသပွေနတေယျ။
ရျောနယျလျဒိုမပါလို့ အတ်တလနျတာကို ရှုံးခဲ့တဲ့ပှဲမှာ နညျးပွခေါကျထားတာလား ဒဏျရာကွောငျ့လားဆိုတာ သို့လော သို့လော ဖွဈစရာရှိလာနသေလို အသငျးရဲ့အတှငျးရေးမှာ အကျကှဲမှုတှေ ရှိနတေယျ။ ဂြီနိုအာနဲ့ပှဲမှာ ရျောနယျလျဒိုက ဂိုးမသှငျးခဲ့ရလို့ တသငျးလုံးကို ပတျရမျးသှားခဲ့တယျ။
အဲဒီပှဲမှာ အသငျးဂြာစီကိုပါ ကွမျးပျေါပဈပေါကျခဲ့လို့ နညျးပွပီယာလိုက သူ့ကို နောငျကြဥျအောငျ ကွိတျထားတာကွောငျ့ အတ်တလနျတာနဲ့ပှဲမှာ လူကွားကောငျးအောငျ ဒဏျရာကို အကွောငျးပွပွီး ဝငျမကစားခိုငျးတာလို့ သတငျးတှကေ ထှကျနတေယျ။
လကျရှိမှာ ရျောနယျလျဒိုနဲ့ ဂြူဗငျတပျဈတသငျးလုံးရဲ့ ဆကျဆံရေးက စကူဒတျတိုကို လကျလှတျလိုကျရခြိနျကစလို့ လုံးဝဥသုံ ပွိုကှဲသှားနိုငျပါတယျဆိုတဲ့ ယူဆခကျြတှကေို ပီယာလိုရဲ့ ဆုံးမမှုတှကေ ထပျထိုးပွီး လောငျမွိုကျစခေဲ့တယျ။
အတ်တလနျတာက ဝါးအစညျးပွနေတေဲ့ အိုးလဒေီကို အနိုငျယူပွီး အဆငျ့ ၃ ကို ခုနျတကျကာ အခှငျ့ကောငျးယူသှားတယျ။ ဂြူဗငျတပျဈက မွနေိမျ့ရာ လှံထိုးခံရပွီး ရပျတညျမှု အဆငျ့ ၄ ကနေ အဆငျ့ ၄ နဲ့ ၂ မှတျအဖွတျခံလိုကျရတယျ။ ဒါကနေ ရာသီအသိမျးမှာ ခနျြပီယံလိဂျဝငျခှငျ့အထိပါ စိုးရိမျလာရတယျ။
သူ့အောကျမှာ ရပျတညျနတေဲ့ နာပိုလီနဲ့ လာဇီယိုတို့က တပှဲလြော့ကစားထားပွီး ၃ မှတျနဲ့ ၄ မှတျအကှာကနေ ဖိအားပေးလါလို့ဖွဈတယျ။ ဒါက ပီယာလိုရဲ့လညျပငျးကို ညှဈထားသလိုပါပဲ။ ရျောနယျလျဒိုရဲ့ ပွဿနာကို သူဘယျလိုရှငျးမလဲ? ရာသီအသိမျးမှာ ဂြူဗငျတပျဈရဲ့ ဥရောပမကျြနှာပကျြရမယျ့ အခွအေနကေ ဆိုကျလာတော့မလား?
ရျောနယျလျဒိုမပါတိုငျး အသငျးက ရှုံးတယျ။ ရျောနယျလျဒိုပါတိုငျးလညျး အသငျးက စိတျမခရြဘဲ ကြီးလနျ့စာစား အခွအေနဆေိုးကို ကွုံနရေတယျ။ ခနျြပီယံလိဂျဝငျခှငျ့အတှကျတော့ ဒဏျရာအကွောငျးပွပွီး ခေါကျထားတဲ့ သူ့ကို ပွနျအားကိုးရဦးမှာဖွဈပွီး ပီယာလိုက မီးကိုကိုငျထားရသလို ယကျကနျယကျကနျနဲ့ စုပျလညျးစူး စားလညျးရူးဖွဈနရေတယျ။
ပွငျးထနျနတေဲ့ အဆငျ့ ၄ တိုကျပှဲအတှကျတော့ ရျောလျနယျဒိုဆီက နောကျဆုံးလကျကနျြ​ခွစှေမျးတှကေို ညှဈထုတျနိုငျပွီး ရာသီကုနျမှာ ပျေါတူဂီသားနဲ့လမျးခှဲရုံမှတပါး အခွားမရှိတော့ပါဘူး။
စကူဒတ်တိုဖလားကို ၉ နှစ်ဆက် သိမ်းပိုက်ပြီးအီတလီကို ဆယ်စုနှစ်တခုကြာ တသမတ်တည်း လွှမ်းမိုးထားဖို့ ကြံစည်နေတဲ့ အိုးလေဒီတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဟာ အခု ၁၀ နှစ်မြောက်မှာတော့ ပျက်စီးခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ဒါက နည်းပြအ​ပြောင်းအလဲ၊ ပီယာလို နဲ့ ရော်နယ်ဒိုတို့နဲ့ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ အတ္တလန်တာနဲ့ပွဲမှာ ရော်နယ်လ်ဒို ဝင်မကစားခြင်း မရှိခဲ့ဘူး။ ဂျူဗင်တပ်စ်ရှုံးတယ်။ ဒါက ရော်နယ်လ်ဒို မပါတဲ့ ၄ ပွဲစလုံးကို ဂျူဗင်တပ်စ်က ရှုံးနိမ့်ခြင်းဖြစ်တယ်။ အချက်အလက်က သက်သေပြနေတယ်။
ရော်နယ်လ်ဒိုမပါလို့ အတ္တလန်တာကို ရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲမှာ နည်းပြခေါက်ထားတာလား ဒဏ်ရာကြောင့်လားဆိုတာ သို့လော သို့လော ဖြစ်စရာရှိလာနေသလို အသင်းရဲ့အတွင်းရေးမှာ အက်ကွဲမှုတွေ ရှိနေတယ်။ ဂျီနိုအာနဲ့ပွဲမှာ ရော်နယ်လ်ဒိုက ဂိုးမသွင်းခဲ့ရလို့ တသင်းလုံးကို ပတ်ရမ်းသွားခဲ့တယ်။
အဲဒီပွဲမှာ အသင်းဂျာစီကိုပါ ကြမ်းပေါ်ပစ်ပေါက်ခဲ့လို့ နည်းပြပီယာလိုက သူ့ကို နောင်ကျဉ်အောင် ကြိတ်ထားတာကြောင့် အတ္တလန်တာနဲ့ပွဲမှာ လူကြားကောင်းအောင် ဒဏ်ရာကို အကြောင်းပြပြီး ဝင်မကစားခိုင်းတာလို့ သတင်းတွေက ထွက်နေတယ်။
လက်ရှိမှာ ရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်တသင်းလုံးရဲ့ ဆက်ဆံရေးက စကူဒတ်တိုကို လက်လွှတ်လိုက်ရချိန်ကစလို့ လုံးဝဥသုံ ပြိုကွဲသွားနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ယူဆချက်တွေကို ပီယာလိုရဲ့ ဆုံးမမှုတွေက ထပ်ထိုးပြီး လောင်မြိုက်စေခဲ့တယ်။
အတ္တလန်တာက ဝါးအစည်းပြေနေတဲ့ အိုးလေဒီကို အနိုင်ယူပြီး အဆင့် ၃ ကို ခုန်တက်ကာ အခွင့်ကောင်းယူသွားတယ်။ ဂျူဗင်တပ်စ်က မြေနိမ့်ရာ လှံထိုးခံရပြီး ရပ်တည်မှု အဆင့် ၄ ကနေ အဆင့် ၄ နဲ့ ၂ မှတ်အဖြတ်ခံလိုက်ရတယ်။ ဒါကနေ ရာသီအသိမ်းမှာ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်အထိပါ စိုးရိမ်လာရတယ်။
သူ့အောက်မှာ ရပ်တည်နေတဲ့ နာပိုလီနဲ့ လာဇီယိုတို့က တပွဲလျော့ကစားထားပြီး ၃ မှတ်နဲ့ ၄ မှတ်အကွာကနေ ဖိအားပေးလါလို့ဖြစ်တယ်။ ဒါက ပီယာလိုရဲ့လည်ပင်းကို ညှစ်ထားသလိုပါပဲ။ ရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ ပြဿနာကို သူဘယ်လိုရှင်းမလဲ? ရာသီအသိမ်းမှာ ဂျူဗင်တပ်စ်ရဲ့ ဥရောပမျက်နှာပျက်ရမယ့် အခြေအနေက ဆိုက်လာတော့မလား?
ရော်နယ်လ်ဒိုမပါတိုင်း အသင်းက ရှုံးတယ်။ ရော်နယ်လ်ဒိုပါတိုင်းလည်း အသင်းက စိတ်မချရဘဲ ကျီးလန့်စာစား အခြေအနေဆိုးကို ကြုံနေရတယ်။ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်အတွက်တော့ ဒဏ်ရာအကြောင်းပြပြီး ခေါက်ထားတဲ့ သူ့ကို ပြန်အားကိုးရဦးမှာဖြစ်ပြီး ပီယာလိုက မီးကိုကိုင်ထားရသလို ယက်ကန်ယက်ကန်နဲ့ စုပ်လည်းစူး စားလည်းရူးဖြစ်နေရတယ်။
ပြင်းထန်နေတဲ့ အဆင့် ၄ တိုက်ပွဲအတွက်တော့ ရော်လ်နယ်ဒိုဆီက နောက်ဆုံးလက်ကျန်​ခြေစွမ်းတွေကို ညှစ်ထုတ်နိုင်ပြီး ရာသီကုန်မှာ ပေါ်တူဂီသားနဲ့လမ်းခွဲရုံမှတပါး အခြားမရှိတော့ပါဘူး။
ဥရောပါစူပါလိဂျဟာ EPLကိုသာမက ဘောလုံးကမ်ဘာကို ဝါးမြိုဖကျြဆီးလိမျ့မယျလို့ အာဆငျဝငျးဂါး ပွငျးပွငျးထနျထနျ သတိပေး